Legende Bordeaux Blanc 2017 ~ ICT.com.mm
HomeLegende Bordeaux Blanc 2017
Légende Bordeaux Blanc Sauvignon Blanc, Semillon Alcohol: 12% Dry/ 2017 Bordeaux AOC/ France Tasting Notes Pale straw with glints of green hue. Aroma of white fruits and acacia flower. Full-bodied, rounded on... [Learn more]
Bordeaux AOC/ France
Pale straw with glints of green hue. Aroma of white fruits and acacia flower. Full-bodied, rounded on the palate with flavorful sensation of sweetness and freshness.
Enjoy either as an aperitif or pair with shellfish, chicken salad, light flavored Asian dishes and desserts.
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Legende Bordeaux Blanc (2017) ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံး၊ ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံး ဝိုင်တွေထွက်ပေါ်ရာဒေသဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်အနောက်တောင်ပိုင်း ဘော်ဒိုးဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sauvignon Blanc - Semillon Wine ရောစပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းက အဖြူရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Sauvignon Blanc စပျစ်နဲ့ ရွှေရောင်သန်းနေတဲ့ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ချိုမြမှုအတွက်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ပြင်သစ်ဝိုင်စပျစ် Semillon တို့ကို ရောစပ်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု (၁၂) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ Dry/ 2017 ဝိုင်ဖြူ (White - Green and Flinty) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ပုစွန်တုပ်၊ ပုစွန်ဆိတ်၊ ကမာ၊ ယောက်သွား၊ ခုံးကောင်၊ ဂဏန်း စတဲ့အခွံမာရှိရေသတ္တဝါဟင်းလျာ၊ ကြက်သားသုပ်၊ အနံ့မပြင်းတဲ့ အာရှအစားအစာတွေနဲ့ အချိုပွဲတွေအတွက် လုံးဝလိုက်ဖက်တဲ့ ပြင်သစ်ဝိုင်ဖြူ ဖြစ်ပါတယ်။
Bordeaux White France
One of the most important wine regions of the world, Bordeaux isapowerhouse producer of wines of all colors, sweetness levels, and price points. Separated from the Atlantic Ocean byacoastal pine forest, this relatively flat region hasamild maritime climate, marked by cool wet winters and warm summers. Annual weather differences create significant vintage variations, making Bordeaux an exciting region to follow.The Gironde estuary,adefining feature of Bordeaux, separates most of the region into the Left Bank and the Right Bank. Farther inland, where the Gironde splits into the Garonne and Dordogne Rivers, the bucolic, rolling hills of the area in between, called Entre-Deux-Mers, isasource of great quality, approachable reds and whites.